Gran Canaria no manokatra ny varavaran'ny fampirantiana ho an'ny mpanamory any Malabo
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Guinea ekoatera » Gran Canaria dia manokatra ny varavaran'ny fampirantiana ho an'ny mpanamory any Malabo
Gran Canaria dia manokatra ny varavaran'ny fampirantiana ho an'ny mpanamory any Malabo
Ho an'ny mpandeha amerikanina, Victor Mooney, Gran Canaria dia nody nandritra ny telopolo andro talohan'ny andrana fahefany nivezivezy nanerana ny Oseana Atlantika.
Gran Canaria, nosy iray izay any Espaina, any amin'ny Ranomasimbe Atlantika sahabo ho 150 kilometatra miala ny morontsiraka avaratrandrefan'i Afrika no nametraka ny fototry ny fiaraha-miasa amin'ny ady amin'ny VIH / SIDA. Ho an'ny mpitaingina Amerikanina, Victor Mooney miaraka amin'ny zom-pirenen'i Guinea Ekoatorialy, dia nody an-trano nandritra ny telopolo andro talohan'ny andrana fahefany nitaingina ny Oseana Atlantika.
Ny sambon'i Mooney, Spirit of Malabo, dia tonga tao Port of Algeciras, Espana tamin'ity herinandro ity avy any New York ary handeha ho any Museum of Modern Art Ginea Ekoatorialy izay toerana anaovana fampirantiana maharitra. Ny fampirantiana Spirit of Malabo dia hanasongadina rakitsary sary mitantara ny hatsaran'ny Gran Canaria mifangaro amin'ny zanak'olombelona. Ny fampirantiana dia hotontosain'ny South Africa Arts International.
Ny seranana manaraka ho an'ny Fanahin'i Malabo dia Pointe-Noire, Kongo avy eo ny Seranan'i Malabo, Guinea Ekoatorialy, izay antenaina hahatongavana mandritra ny fahatsiarovana isan-taona ny Andro manerantany SIDA, Desambra 1. Andriamatoa Mooney dia niainga avy any Puerto Deportivo Pasito Blanco any Maspalomas ary tonga tany New Bridge Brooklyn Bridge. Naharitra iraika amby roapolo volana ny laharana dimy arivo miampy ny transatlantic.
Ny seranam-piaramanidina Keflavik dia nameno haingana ny fahaizan'ny Alemanina very
Mazatlán: Fizahan-tany avy any Etazonia sy Kanada mampiseho fitomboana an-tsoratra amin'ny 2017
49 minitra lasa izay